Sawirro:100 maalmood ka dib taageerayaasha farmaajo oo buuxin waayey garoonka …… | Xaqiiqonews
Sawirro:100 maalmood ka dib taageerayaasha farmaajo oo buuxin waayey garoonka ……
farmaajo ayaa markii la doortay 8-dii bishii febuary 2017 waxaa waddooyinka muqdisho buuxiyey dadweyne farabadan oo aaminsanaa in farmaajo uu noqon doono madaxweyne ka duwan kuwii hore dalka u soo maray oo dhamaantood ku tilmaamsanaa in ay ahaayeen qabiileytsayaal doonaya in xilka ay u isticmaalaan danaha beeshooda.
Sawirrada taageeryaasha farmaajo daqiiqado ka dib guushii xilka madaxweynenimo
balse 100 maamlmood ka dib guushii farmaajo waxaa hoos u dhacay rajadii dadweynaha waxaana si aad aad arintaasi looga fahmi karaa sawirradii lga soo qaaday dibad bixii maanta lagu qabtay stadiuam benadir.
Wararka hada naga soo gaara garoonka Kubada cagta ee Banaadir oo ay ka socoto Banaanbax balaaran oo lagu taageerayo 100-ka maalmood ee ugu horeeyay Madaxweyne Farmaajo ayaa la soo sheegayaa Nidaam xumada meesha ka jirta awgeed in dad badan ay carareen iyagoo sugi waayeen Khudbada Madaxweynaha.
Waxaa la sheegay in dadka waqti hore oo saaka ay yimaadeen garoonka Koonis, waxaana soo daahay madaxda dalka oo loo qorsheeyay in waqti hore ay dadka la hadlaan, Maadaama ay tahay Bisha Ramadaan dad badan oo u adkeysan waayay Kuleylka Cadceeda ayaa iskaaga tagay Khudbada madaxweynaha oo bilow ah, sidoo kale dad badan ayaa meesha ku suuxay oo ay ku jirto Haweeney Uur leh.
Sawirrada Garoonka Stadium bendir oo cidla ah iyadoo la sugayo khudbadda madaxweynaha \_